Oracle Qalabka Soo kabashada. Oracle DBF Dayactirka & Soo Celinta Software.
DataNumen Oracle Recovery waa ugu fiican Oracle DBF qalabka dayactirka iyo soo kabashada adduunka. Waxay dayactiri kartaa musuqmaasuq Oracle DBF keydinta faylasha iyo soo celinta dhammaan miisaska iyo walxaha kale ee ku jira intii suurtagal ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,645 cod)
maxaad DataNumen Oracle Recovery?
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Oracle Recovery v1.0
Taageer dhammaan noocyada Oracle database DBF files.
Taageero soo kabasho DBF faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo soo kabsado qayb ka mid ah DBF files.
Ku dhexjiray qolofka Windows, markaa waad soo kaban kartaa a DBF ku fayl garee liiska macnaha guud ee Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen Oracle Recovery inuu ka soo kabto Musuqmaasuq Oracle Macluumaadka
Marka aad DBF faylasha way waxyeeloobeen ama musuqmaasuqeen oo si caadi ah uma furi kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen Oracle Recovery si loo baaro DBF faylasha iyo soo kabsado xogta ugu badan iyaga intii suurto gal ah.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo ceshan wixii dhaawac ama musuqmaasuq ah DBF faylasha leh DataNumen Oracle Recovery, fadlan xir wixii barnaamijyo kale ah ee wax ka beddeli kara DBF files.
Xullo waxyeelada ama musuqmaasuqa DBF faylka la soo celinayo:
Waad ku dari kartaa DBF si toos ah magaca faylka ama guji kan
badhanka si aad u hesho DBF faylka lagu soo celiyo kombuyuutarka maxalliga ah.
Marka la eego, DataNumen Oracle Recovery badbaadin doonaa soo kabsaday DBF fayl u gal fayl cusub oo la magac baxay xxxx_recovered.DBF, halka xxxx uu yahay magaca isha DBF faylka. Tusaale ahaan, il ahaan DBF faylka USERS01.DBF, Magaca asalka u ah feylka la soo helay wuxuu noqon doonaa USERS01_recovered.DBF. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Waxaad si toos ah ugu dari kartaa magaca faylka la soo kabsaday ama guji
badhanka si ay u caleenta iyo xulo faylka soo kabsaday.
batoonka, iyo DataNumen Oracle Recovery doonaa start iskaanka iyo soo kabashada ilaha DBF faylka. Bar horumarka
Kadib dib u soo kabashada, haddii isha DBF faylka si guul leh ayaa loo soo kaban karaa, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad furi kartaa soo kabsaday DBF faylka ku qor Oracle.
DataNumen Oracle Recovery 1.0 waxaa la sii daayay Febraayo 22nd, 2019